Tottenham Hotspur oo xiddig u ciyaara dul dhigtay £ 200m | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Tottenham Hotspur oo xiddig u ciyaara dul dhigtay £ 200m
Tottenham Hotspur oo xiddig u ciyaara dul dhigtay £ 200m
Himilo FM – ottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay Real Madrid u sheegtay inay doonayaan jebinta rikoorka suuqa kala iibsiga haddii ay doonayaan la saxiixashada Christian Eriksen.
Kubad sameeyaha Danish-ka ayaa la rumeysan yahay in uu ku laaban doono liiska ciyaartoyda diiradda u saaran Real Madrid kaddib markii uu tababare Zinedine Zidane kusoo laabtay isbuucii lasoo dhaafay kooxda.
Eriksen waxaa doonayay Zidane wakhtigii uu Bernabeu joogay intii u dhaxeysay 2016 illaa 2018, sida ay qortay Daily Star kooxda reer Spain waxay diyaar u tahay hab cusub oo loogu talagalay suuqa xagaaga..
Inkastoo 27 jirkan lagu soo waramayo in uu diidan yahay heshiis kordhin seddex sanno ah xilli 15 billood ay ka hartay heshiiskiisa, Spurs ayaa weli ku qiimeysa £ 200m.
Haddii ay Real la saxiixato waxay dhaafi doonaan qiimihii ugu badnaa ee xiddig lagu iibsado oo ahaa lacag dhan £ 198m oo ay Paris Saint-Germain ku iibsatay Neymar iyaga oo kala soo saxiixday Barcelona bishii August 2017.
Previous: Daraasad cusub: Meeraha Mercury ayaa u dhaw dhulka!
Next: Barcelona oo dib u soo celisay xiisaha Antoine Griezman